Kitra – Tsy voahaja ny fifanarahana: nesorin’ny Caf ny handraisan’i Kameronina ny “Can 2019” - ewa.mg
Kitra – Tsy voahaja ny fifanarahana: nesorin’ny Caf ny handraisan’i Kameronina ny “Can 2019”
Foot - News - Sport - Kitra – Tsy voahaja ny fifanarahana: nesorin’ny Caf ny handraisan’i Kameronina ny “Can 2019”
Nangidy ary tena tsy levon’ny vavonin’ny vahoaka kameroney, ny fanapahan-kevitra noraisin’ny kaonfederasiona afrikanina baolina kitra “Caf”, tamin’ny fanesorana ny fampiantranoana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, teo am-pelan-tanan’izy ireo.
Samy naneho ny alahelony sy ny hatezerany avokoa ireo vahoaka kameroney, vao nandre ity fanapahan-kevitra ity. Tao ny nanambara fa efa tsy fitiavana azy ireo mihitsy ny antony. Ny sasany indray nitoreo fa tena fanaovana tsinontsinona an’i Kameronina, firenena goavana sy manana ny lazany amin’ny baolina kitra izao, ary raisin’izy ireo ho famotehana azy, tanteraka.
Tetsy an-kilany, nanambara i Ahmad, filohan’ny Caf fa anisan’ireo olona tena nanohana an’i Kameronina, handray ity “Can 2019” ity ny tenany, saingy noho ny zava-misy, tsy afaka ny hitazam-potsiny izy satria ny fotoana mandeha.
Betsaka ireo antony. Eo ny tsy fanajana ny bokin’andraikitra sy ny fepetra rehetra mifanaraka hanatontosana ny asa, napetraka tamin’ireo tomponandraikim-panjakana, kamerone. Tsy misy fivoarany ny asa fanamboarana sy ny fikarakarana, taorian’ny fijerena ny sary, mahakasika izany.
Vokatr’izany, voatery noesorina tamin’i Kameronina, ny fandraisana ny “Can 2019”. Manao antso vaovao ho an’ireo firenena vonona hampiantrano izany, ny Caf. Hatreto aloha, tsara toerana handray izany, i Maraoka efa manana ny fotodrafitrasa mifanaraka amin’izany. Mbola hiady ny handray izany koa anefa i Afrika Atsimo. Ho fantatra mialoha ny faran’ity taona 2018 ity, izay tena hanaovana ny “Can 2019”.
L’article Kitra – Tsy voahaja ny fifanarahana: nesorin’ny Caf ny handraisan’i Kameronina ny “Can 2019” a été récupéré chez Newsmada.
Cameroun - Can 2019
Andro faha 14 – Ligue 1 Conforama / 2018-19
Iaino ireo fotoana namiratra tamin'ity andro faha 14 amin'ny Ligue 1 Conforama en vidéo. Ligue 1 Conforama - Saison 2018/2019 - Andro faha 14 Olympique Lyonnais - AS Saint-Etienne (1-0) Paris Saint-Germain - Toulouse FC (1-0) SM Caen - AS Monaco (0-1) Dijon FCO - Girondins de Bordeaux (0-0) FC Nantes - Angers SCO (1-1) Stade de Reims - EA Guingamp (2-1) RC Strasbourg Alsace - Nîmes Olympique (0-1) Montpellier Hérault SC - Stade Rennais FC (2-2) OGC Nice - LOSC (1-0) Amiens SC - Olympique de Marseille (1-3) Buteurs : Jason DENAYER (62' - Olympique Lyonnais) / Edinson CAVANI (9' - Paris Saint-Germain) / Radamel FALCAO (55' - AS Monaco) / Stéphane BAHOKEN (5' - Angers SCO) / Majeed WARIS (89' - FC Nantes) / Xavier CHAVALERIN (2' - Stade de Reims) / Boulaye DIA (68' - Stade de Reims) / Marcus THURAM (81' pen - EA Guingamp) / Hervé LYBOHY (70' - Nîmes Olympique) / Hatem BEN ARFA (5' - Stade Rennais FC) / Andy DELORT (45' +1 - Montpellier Hérault SC) / Andy DELORT (49' - Montpellier Hérault SC) / Benjamin BOURIGEAUD (71' pen - Stade Rennais FC) Cartons rouges/exclusions : RAFAEL (Olympique Lyonnais) / Stefan MITROVIC (RC Strasbourg Alsace)
NBA – Voka-dalao 10 Decembre 2018 – Boston Celtics vs New Orleans Pelicans
Celtics / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Morris 32 10/15 5/8 6/7 0 4 4 4 5 0 2 0 31 31 D. Theis 22 3/8 0/3 0/0 1 4 5 0 3 1 0 0 6 7 J. Tatum 33 10/16 1/5 0/0 1 5 6 1 1 0 2 1 21 21 M. Smart 29 2/8 0/4 0/2 1 1 2 5 3 3 3 0 4 3 T. Rozier 32 4/7 1/4 1/2 3 4 7 6 1 2 1 0 10 20 S. Ojeleye 22 4/10 1/6 2/2 1 5 6 0 1 0 0 0 11 11 R. Williams 26 3/5 0/0 1/2 4 7 11 0 1 1 0 3 7 19 P. Dozier 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 B. Wanamaker 18 2/4 0/1 0/0 0 3 3 4 1 1 2 0 4 8 J. Brown 25 6/16 4/7 3/4 3 4 7 3 5 0 3 1 19 16 Total 44/90 12/39 13/19 14 37 51 23 21 8 13 5 113 Pelicans / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Davis 38 17/34 0/2 7/9 3 4 7 2 1 4 0 0 41 35 J. Randle 28 7/13 0/0 6/8 2 9 11 4 4 0 5 0 20 22 S. Hill 20 1/3 1/3 0/0 0 6 6 2 1 1 1 0 3 9 J. Holiday 39 3/10 1/4 0/0 0 1 1 6 0 3 4 0 7 6 T. Frazier 32 3/6 2/3 0/0 1 0 1 10 5 1 2 0 8 15 C. Diallo 19 3/3 0/0 0/0 0 7 7 0 3 0 0 1 6 14 N. Mirotic 7 1/5 1/4 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 D. Miller 27 2/4 2/4 1/2 0 2 2 1 3 2 0 0 7 9 W. Johnson 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Okafor 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 K. Williams 3 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 I. Clark 17 0/5 0/4 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 -2 A. Harrison 3 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 5 Total 39/87 8/26 14/19 6 33 39 28 19 11 13 1 100
Voka-dalao 21 Nov 2018 – Boston Celtics vs New York Knicks
Celtics / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Tatum 29 4/12 1/1 6/9 3 5 8 0 2 0 0 0 15 12 A. Baynes 12 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 2 A. Horford 35 7/11 2/2 3/4 3 4 7 5 0 1 0 3 19 30 K. Irving 37 9/25 2/9 2/2 3 3 6 13 1 3 2 1 22 27 J. Brown 26 4/10 0/3 3/6 1 4 5 0 2 2 2 2 11 9 M. Morris 30 7/13 3/6 4/4 1 7 8 4 4 1 1 0 21 27 D. Theis 4 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 G. Hayward 32 6/14 2/7 5/5 0 7 7 3 1 2 1 0 19 22 M. Smart 20 1/4 0/2 0/2 3 2 5 4 1 1 1 0 2 6 T. Rozier 16 0/4 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 -4 Total 38/97 10/33 23/32 15 35 50 30 16 10 8 9 109 Knicks / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Vonleh 30 6/9 2/2 2/2 2 8 10 3 1 0 0 3 16 29 M. Hezonja 13 1/7 1/6 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 3 0 E. Kanter 23 4/10 0/0 2/2 6 4 10 1 2 0 1 0 10 14 E. Mudiay 20 1/5 1/3 2/2 0 2 2 2 2 0 1 1 5 5 T. Hardaway Jr. 38 8/19 4/7 1/2 0 4 4 4 3 0 7 0 21 10 K. Knox 26 3/5 2/2 3/4 0 9 9 0 3 0 1 1 11 17 M. Robinson 16 4/4 0/0 0/0 1 3 4 0 4 0 0 6 8 18 F. Ntilikina 27 3/6 0/2 0/0 0 1 1 1 4 0 2 0 6 3 T. Burke 32 11/20 4/6 3/3 0 6 6 11 2 2 3 0 29 36 A. Trier 15 3/4 1/2 1/2 0 1 1 3 2 0 2 0 8 8 Total 44/89 15/30 14/17 9 40 49 25 24 3 17 11 117
Basket - News - Sport - News Mada
Basikety – CCCOI: fandresena faharoa ho an’ny CosPN
Niditra tamin’ny andro faharoa amin’ny fiadiana ny amboaran’ny klioba tompondakan’ny ranomasimbe Indiana, taranja basikety, ny ekipa malagasy, omaly. Vokatra tsara hatrany no azo ary maivana ho an’ny Malagasy ny ekipan’ny Flippers avy any Maorisy. Isa mavesatra 94 no ho 40 no nandavoan’ny CosPN ity ekipa maorisianina ity. Tsy afa-bela ireto farany hatrany am-piandohana ka hatramin’ny fiafaran’ny lalao. Raha tsiahivina, tsara ny vokatra ho an’ny CosPN tamin’ny andro voalohany, ny alarobia lasa teo, nanoloana ny ekipan’ny Beau Vallon Seychelles. Mbola mafy anefa ny miandry ny ekipa malagasy, ho amin’ny anio, satria ekipa anisan’ny kalaza sy ambony traikefa no hodinganiny, dia ny Premium Cobras, avy any Seychelles. Lalao tafiditra ao anatin’ny andro fahatelo amin’ny fifanintsanana. Nilaza ny hanome sy hampitombo hatrany ny tsara efa vita ireo mpilalao ao amin’ny CosPN ary vonona ny handrombaka ny amboara amin’ity taona ity. Mi.RazL’article Basikety – CCCOI: fandresena faharoa ho an’ny CosPN a été récupéré chez Newsmada.
Foot - News - Sport - Delire Madagascar
« COUPE DE LA CONFEDERATION SY LIGUE DES CHAMPIONS »: Ho mafy ny lalao miverina
Tsy gaga tamin’ny vokatra nitranga teo Mahamasina iny ny mpanazatra an’i Deportivo Unidad avy atsy Guinée Equatorial. « Reraka izahay satria iray andro mialoha ny lalao izahay vao tonga sady 15 ora no nanaovana ny dia ». Ho henjana ny lalao miverina satria tsy nahatafavoaka ny tena lalao ireto vahiny ireto na dia izy ireo aza no nampiditra ny baolina voalohany vao 6 minitra monaja tamin’ny penalty izay nodakan’i Julio . 4 minitra tao aorian’io baolina tafiditry ny vahiny io dia nahasahala ny isa ny Elgeco Plus tamin’ny alalan’i Nesta. Marihana fa baolina roa ny tafiditr’i Nesta tany amin’ny ministra 54. Teo alohan’io baolina io no nahatafiditra ny faharoa i Bila 5 minitra ny fidirana faharoa. Nanambara kosa anefa ny ny kapiteny Raveloarisona Erdino, na i Dino fa niezaka nitady baolina fahefatra mba hisian’ny elanelan’isa betsaka kanefa na izany aza ilaina ny fifehezana ny lalao. Na eo aza ny fanehoan-kevitry ny vahiny dia manana tombony sy herijika hiakarana amin’ny dingana manaraka ny Elgeco Plus. « Hiezaka ireo mpilalao ireo any amin’ny lalao miverina ary manantena fa ho tafakatra amin’ny dingana manaraka », hoy ny filohan’ny Elgeco plus, Alfred Randriamanampisoa. Nanome toky ireo ao amin’ny « comité d’organisation » hijery manokana ny mety azo hanampiana ny fandratoana ny lalao miverina any Guinée équatorial satria mavesatra ny saran-dalana sy ny fivahinianana any. Apetraka amin’ny mpanazatra kosa ireo mpilalao ho entina any an-toerana. Mangataka amin’ny mahalala tanana rehetra mba hanampy izay azo atao ary mino ity filohan’ny Elgeco plus ity fa ho avy izy ireo noho ny fandresena azontsika teo iny. Ho mafy ihany koa ny lalao miverina ataon’i Cnaps sport any Zimbabwe satria nisaraka 1 sy 1 ny lalao nihaonany tamin’i Platinum. 64 minitra no nahatafiditra ny baolina voalohany ny Cnaps Sport, penalty nodakan’i Ando. Tsy ela fa 6 minitra monja tao aorian’io dia nahatafiditra ny Zimbabwe tamin’ny alalan’i Edwin. Nirina R. Cet article « COUPE DE LA CONFEDERATION SY LIGUE DES CHAMPIONS »: Ho mafy ny lalao miverina est apparu en premier sur déliremadagascar.
Ligue 1 – RC Strasbourg Alsace – SM Caen ( 2-2 )
RC Strasbourg Alsace - SM Caen ( 2-2) vidéo. Ligue 1 Conforama - Saison 2018/2019 - Andro faha 17- Stade de la Meinau - Alahady 9 décembre 2018 Buteurs : Pablo MARTINEZ (5' - RC Strasbourg Alsace) / Fayçal FAJR (22' - SM Caen) / Lebo MOTHIBA (23' - RC Strasbourg Alsace) / Saïf-Eddine KHAOUI (80' - SM Caen) Composition RC Strasbourg Alsace : 1 - Matz SELS / 4 - Pablo MARTINEZ / 5 - Lamine KONE / 8 - Jonas MARTIN / 10 - Benjamin CORGNET / 12 - Lebo MOTHIBA / 13 - Stefan MITROVIC (c) / 18 - Ibrahima SISSOKO / 19 - Anthony CACI / 26 - Adrien THOMASSON / 27 - Kenny LALA Composition SM Caen : 2 - Paul BAYSSE / 3 - Yoël ARMOUGOM / 4 - Ismaël DIOMANDE / 6 - Prince ONIANGUE (c) / 10 - Fayçal FAJR / 12 - Claudio BEAUVUE / 14 - Jonathan GRADIT / 18 - Yacine BAMMOU / 19 - Malik TCHOKOUNTE / 21 - Frédéric GUILBERT / 30 - Brice SAMBA
Basikety – CCOI N1A: hanainga rahampitso ny COSPN
Vonona tanteraka amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indiana, taranja basikety ny ekipan’ny COSPN, klioba eo anivon’ny polisim-pirenena. Fifaninanana izay hotanterahina any Seychelle ny 5 hatramin’ny 13 desambra ho avy izao. Ny COSPN izay hisolo tena ny firenena malagasy ary tompondaka tamin’ny fifaninanam-pirenena N1A 2018, taranja basikety, notontosaina teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, farany teo. Delegasiona miisa 16 no hanainga rahampitso, talata 4 desambra, amin’ny 1 ora maraina, hihazo an’ny Seychelle izay hahitana ireo mpilalao sy ny mpanazatra ary ny mpikambana eo anivon’ny polisim-pirenena. Nanambara ireo mpilalao fa hitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara amin’ity fifaninanana ity. “ Tanjona ny handrombaka ny amboara amin’ity fifaninanana ity ary hitondra izany eto Madagasikara ho voninahitry ny firenena malagasy iray manontolo”, hoy ny fampanantenana nataon’ny filohan’ny COSPN, seksiona basikety, Lebiria Rufin, raha nisolo tena ireo mpilalao, izy. Ankoatra izay, nanolotra fisaorana ho an’ireo rehetra nitondra fanampiana sy nanohana ihany koa ny COSPN ary mbola manokatra ny varavarana ho an’ireo mahalala tanana vonona ny hanolotra fanampiana ho azy ireo amin’izao ady goavana hatrehan’izy ireo izao. “Ady goavana no hatrehana ka ilaina ny fanohanana avy amin’ireo tsara sitrapo ka vonona ny hifanolo-tanana aminay”, raha ny nambaran’ny solontenan’ny mpilalao. Omaly, tonga nangata-tsodrano teny amin’ny Minisiteran’ny filaminam-bahoaka ireo mpilalao eo anivon’ity ekipa hiatrika fifaninanana any Seychelle ity. Fihetsika feno fahendrena no nentin’izy teo anatrehan’ny Minisitry ny filaminam-bahoaka satria natolotr’izy ireo ny Minisitra ny amboara azony nandritra ny fifaninanana nandraisany anjara ka nahazoany vokatra tsara. Tetsy ankilany, tsy nitazam-potsiny ny ministera fa nanome fanomezana mba ho vatsin-dalana ho an’ ireo mpilalao sy nitso-drano ny ekipan’ny COSPN. Mi.RazL’article Basikety – CCOI N1A: hanainga rahampitso ny COSPN a été récupéré chez Newsmada.
Kitra: matoky ilay «comité de normalisation» ny rehetra
Velombolo ny mpankafy taranja baolina kitra fa tafatsangana ihany ilay komitin’ny fanamarinana, «comité de normalisation», hanomana ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Samy naneho ny heviny avokoa, na mpilalao, na mpanazatra, na mpijery, na mpanohana, na ireo raiamandreny, na fikambanana, ny amin’ny fitsanganan’ilay komitin’ny fanamarinana, «comité de normalisation», eo amin’ny taranja baolina kitra. Komity hisahana sy hikarakara ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasy (FMF). Raha tsiahivina, olon’ny lalàna ary mahafehy tsara ny fifidianana ny hitarika izany, tsy iza fa ramatoa Attalah Béatrice. Tsy zovina amin’ny rehetra izy fa efa nitantana ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena ny fifidianana, fony andron’ny Tetezamita (Cenit). Noho ny traikefany, manantena sy mino ary matoky ny tontolon’ny baolina kitra fa hizotra tsy hisy tomika ny fanatontosana ny fifidianana ho filohan’ny federasiona. Tsy izy irery anefa no hiantsoroka ity adidy mavesatra ity fa eo ihany koa Rabenarivo Sahondra, mpahay lalàna ihany koa. Hanampy azy ireo i Benony Jacques, filohan’ny federasiona tamin’ny fotoan’andro, ary Andriatianarivelo René, tonian’ny fampanoavana eo anivon’ny fitsarana an-tampony. Raha zohina izany, olona efa feno fahaiza-manao sy za-draharaha ny hitondra ny baolina kitra, hatramin’ny 12 mey 2019, fotoana hahataperan’ny fiasan’ity komity ity. Raha ny fantatra, mbola afaka mamerina ny fifidianana tany amin’ireo ligim-paritra hita fa tsy nanaraka ny lalàna izy ireo raha toa ka voamarina izany, araka ny voalazan’ny solontenan’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), tamin’ny mpanao gazety. Marihina fa miverina hatrany am-boalohany indray ny fametrahana antontan-taratasy ho an’ireo ho kandidà hifaninana amin’ity ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra ity. Tompondaka L’article Kitra: matoky ilay «comité de normalisation» ny rehetra a été récupéré chez Newsmada.
Basikety – « Jump tournoi »: tompondaka ny Esca Antanimena
Notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny faran’ny herinandro teo, ilay fifaninanana eo amin’ny samy kolejy sy lycée, taranja basikety. Nafana vay ny lalao famaranana teo amin’ny fifanandrinan’ny Esca Antanimena sy ny Saint François Xavier. Samy dadany ireto ekipa roa ireto ary nifandimby nampitombo ny isa hatrany am-piandohan’ny lalao. Sahala, 53 no ho 53, ny isa teny amin’ny solaitrabe, teo am-piafaran’ny fe-potoana ara-dalàna ka niroso tamin’ny fanalavam-potoana. Nivoaka mpandresy tamin’izany ny Esca Antanimena, rehefa avy niady mafy. Mi.RazL’article Basikety – « Jump tournoi »: tompondaka ny Esca Antanimena a été récupéré chez Newsmada.
Ho an'ny match voalohany nataony ho an'ny Lycée Crossroads any Santa Monica tamin'ny alatsinainy, i LeBron James Jr, na « Bronny »,dia nahavita tsara ny fiandohany satria ny zanak'i Lebron izay 14 taona, dia namono 27 points tamin'ny fandreseny an'ny ekipan'ny Culver City Middle School.
Faha-herintaonan’ny Fikambanana “MIRAMA” : Noraran’ny fanjakana ny fankalazana izany teto Toamasina
Tsy afaka nankalaza ny tsingerin-taona nijoroany feno herin-taona ny sabotsy teo ny fikambanana “MIRAMA” na “Miaro ny Rariny sy ny Marina” eto Toamasina. Notsipahan’ny prefektioran’i Toamasina ny fangatahana nataon’ny fikambanana, izay saika hanao “carnaval” hitety fokontany sy ny rindran-kira saika niarahana tamin’ny mpanan-kanto DIN Rotsaka. Voalaza fa resaka filaminam-bahoaka no antony, nefa raha ny hita dia resaka politika no tena antony, satria adversera akaikin’ny birao politikan’ny IRD eto Toamasina ny mpitarika ity fikambanana ity, ny Me Tody Arnaud. Raha ny fanazavan’ny mpikamban’ny Mirama anefa dia resaka sosialy sy fety rano fotsiny no nokasain’izy ireo atao, fa tsy misy idiran’ny politika mihitsy, saingy tahotra fotsiny ny an’ny fanjakana ka namoaka fandrarana. Tsy ny fikambanana Mirama ihany anefa no efa nanao fangatahana hankalazana ny tsingerin-taonany toy izao teto Toamasina; saingy ity fikambanana ity sy ny Tim ihany no voararan’ny fanjakana tsy nahazo nanao izany. Ny ambiny rehetra anefa ny Mapar, ny Ird, ny Fimami, ny Arema, sy ny maro hafa dia saika nahazo alàlana avokoa nanao izany. Ho an’ny mpikamban’ny Mirama, dia tsy hahakivy azy ireo ny tsy fanajana ny demokrasia izao, fa mitohy hatrany ny asan’izy ireo sy ny tolona; na ho ela na ho haingana dia afaka hankalaza izany ihany izy ireo ho fahafaham-pon’ny mpikambana sy ny vahoakan’i Toamasina. Malala DidierL’article Faha-herintaonan’ny Fikambanana “MIRAMA” : Noraran’ny fanjakana ny fankalazana izany teto Toamasina a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Mahajanga: noraisina manetriketrika ny depiote Nina
Notsenaina tamin’ny fomba manetriketrika ny fahatongavan’ny depiote sady filoha lefitry ny Antenimierampirenena, ho an’ny faritanin’i Mahajanga, Rahantanirina Lalao, ny faran’ny herinandro teo. Nisy ny filaharambe namakivaky ny tanàna tamin’ny alalan’ny diabe sy ny fiara tamin’izao fahatongavany any an-toerana izao. Nitsena azy tamin’izany ireo vahoaka marobe ao Mahajanga, notarihin’ny eo anivon’ny distrika sy ny ben’ny Tanàna, Andriantomanga Mokhtar Salim. Anisan’ny nanotrona sy nanatitra azy tany an-toerana koa ny depiote sady filoha lefitry ny Antenimierampirenena avy any Antsiranana, i Jocelyne Maxime, mbola horaisina manetriketrika koa any amin’ny tany niaviany. Samy avy amin’ny vovonana IRD avokoa izy mirahavavy ireo.Synèse R. L’article Mahajanga: noraisina manetriketrika ny depiote Nina a été récupéré chez Newsmada.
Amboletra, fandotoana, fanimbana …
Vita ny fety. Fety tokoa ka fety, araka izay efa niresahantsika azy teto omaly. Variana amin’ny korana sy lanonana isika. Milomano ao anatin’ny fahapotehan’ny foto-pisainana ka zary fahazarana sady tsy mahataitra ny fandrorana mitsilany. Na mialoha na mandritra na aorian’ny fankalazana ny fetim-pirenena dia tsapa hatrany ny fahatarana mihoa-pampana amin’ny fivoaran’ny fisainan’ny Malagasy. Tsy manenji-dresy sanatria raha manakiana ny tsy fandraisana andraikitra mba hisorohana an’ireny fifanositosehana niteraka faty olona indray tetsy Mahamasina ireny. Tafalatsaka ao anatin’ny kolontsain’ny amboletra isika, hany ka tsy mahalala an’izay hahapotraka na hahafaty intsony ! Toa ireo zava-doza samihafa sady mamohehatra no mitoetra amin’ny fiaraha-monina ankehitriny : manao amboletra ka tsy soavaly tapa-kofehy intsony no filaza azy fa efa tsy laitran’ny balan’ny fananarana intsony. Anarany fotsiny ny lalàna mipetraka saingy ny fitakiana an’ilay « fahalalahana kely rehefa andro fety » no be mpihogahoga. Avy eo mandoto. Be ny mpanao an’eritreritra an’ilay hoe: « an’ikaky ity sa an’i neny » nefa dia tanànan’ny tena, firenen’ireo razambe ity diavina. Tsy Malagasy, angamba, rehefa tsy mangery sy mamany ankalamanjana, manary fako eny amin’izay tandrifin’ny maso. Etsy amin’ny araben’ny Fahaleovantena etsy Analakely mihitsy no anaporofoan’ireo tsy misy saina ny havoretrany sy ny mbola firefarefan’ny sainy ka manaporofo ny tsy mbola fananantsika an’izany Fahaleovantena izany. Mampiaiky an’ireo mpanadio ny loto teto an-drenivohitra. Raha tsy ireo indray dia malaza amin’ny fanimbana. Mavesatra foana ny sandan’ny famotehana isaky ny ampitson’ireny fety lehibe ankalazaina eto amintsika ireny. Ny tsy fanajàna ny fananana iombonana isan’andro efa tsy lazaina intsony. Manginy fotsiny ny halatra an’ireo kely ananan’ny firenena. Tia tanindrazana, hono, isika. Fitiavana hafahafa, angamba, amin’izato toe-tsaina mirefarefa! Sao tokony hatao andro iray natokana ho fandinihan-tena ny datin’ny 26 jona manomboka amin’ny taona ho avy? Aleo ajanona ny fety aman-danonana raha mbola ho zatran’ny amboletra sy ny fandotoana, ny fanimbana ary ny fangalarana. Mba ho voasoroka ny famoizana aina; hadio ny tanàna; hamiratra sy hahafi­naritra jerena izay natsangana; ary tsy ho very ny fananana najoro. L’article Amboletra, fandotoana, fanimbana … est apparu en premier sur AoRaha.
Jiolahy miisa enina indray saron’ny polisy miasa ao amin’ny PPA Antaniavo, ny 24 jona 2019 alina teo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy mankany Mahitsy. Jiolahy malaza ratsy amin’ny fanendahana amin’iny faritra iny ry zalahy ireto, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy. Ny 24 jona 2019 tamin’ny 8 ora alina, nisy vehivavy roa sy lehilahy roa efa mamomamo niharan’ny fanendahan’ireto jiolahy ireto.L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Cnaps: fiahiana sosialy any Antsohihy
Tapitra amin’ity volana jolay ity ny fe-potoana, telo volana, nomen’ny fanjakana ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) eo ambany fiahian’ny minsiteran’ny Asa (METFPLS). Natsangana ny vaomiera manokana « Task force » iarahan’ny roa tonta hanatanteraka ny fitetezana manerana ny faritra eto amintsika. Anisan’ny tanjona ao anatin’izany ny fanentanana ny mpampiasa hanara-dalàna, toy ny fanomezana ny zon’ny mpiasa amin’ny fiahiana sosialy, hisian’ny asa mendrika.Nitety orinasa maro any amin’ny faritra Sofia, toy ny any Antsohihy, ny any Port Bergé,… ity vaomiera ity, ny 16 hatramin’ny 19 jolay teo. Nisy koa atrikasa telo sosona nokarakaraina tany Antsohihy, nifantoka tamin’ny fiahiana sosialy, ho an’ny sehatra tsy miankina (fampianarana, fihariana, vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana mampiasa ECD), mikasika ny Fahasalamana sy ny aroloza (SST) ary ho an’ny mpampiasa sy ny sendikalista ary ny mpianatra, ao anatin’ny fandaharanasa fampiroboroboana ny fiarovana sosialy (PPPS).Manodidina ny 10 isan’andro ny orinasa tsy miankina notsidihina nandritra ireo telo andro ireo. Nomena torohevitra ny mpampiasa amin’ny fomba fandoavana latsakemboka, ny filazan-karama, ny famahana ny olan’ny orinasa sy ny sakana amin’ny fidirana Cnaps, sns. Nentanina koa ny mpiasa hiaro ny zony. Napetraka ny tranoheva manakaiky vahoaka ho an’ny besinimaro, nampahafantatra ny asan’ny Cnaps sady nanoro hevitra sy nanampy ny rehetra.Njaka A.L’article Cnaps: fiahiana sosialy any Antsohihy a été récupéré chez Newsmada.
Raharaham-pitsarana :: Olona roa nahazo didy famoahana vonjimaika vokatry ny fanelanelanana
Voafonja roa no nahazo didy famoahana am-ponja vonjimaika tato anatin’ny telo volana. Vokatry fanelanelanana nataon’ny fikambanana “Acat Madagascar” niaraka tamin’ireo mpiara-miombona antoka aminy no nahafahana namoaka ireo olona ireo tany am-ponja. “Taorian’ny fitondrana ny raharahan’izy ireo teny amin’ ny Fitsarana no nahazoan’izy ireo fahafahana vonjimaika”, hoy Raherimiarantsoa Mamihaja, mpandrindra nasionalin’ ny tetikasa famoahana am-ponja vonjimaika ao amin’ny fikambanana Acat, nandritra ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny fandraharahana ny fonja, tamin’iny herinandro iny. Voalaza fa mbola manohy ny fanentanana ireo voafonja, mpiasan’ny fonja sy ireo mpisehatra rehetra ny fikambanana ankehitriny ny amin’ ny tokony tsy handefasana am-ponja avy hatrany an’ireo tsy ara-dalana ny Acat Madagascar. nanao tsy fanarahan-dalàna madinika . “Nanomboka tamin’ny taona 2017 ary hifarana amin’ny 2020 ny teti kasa. Nisy ny fitsidihana ary nohazavaina tamin’ireo voakasik’ izany ny antony tokony hiadiana amin’io fampidirana am-ponja vonjimaika mandeha ho azy io”, hoy hatrany Raherimiarantsoa Mamihaja. Ankoatra ny fanampiana ireo voafonja ,dia anisan’ny fandraisana anjara amin’ny fampihenana ny isan’ireo voafonja ihany koa ity hetsika hataon’izy ireo ity. Efa misy ny fandraisan’ andraikitry ny Fitsarana ny amin’ny tokony hampihenana ny isan’ny olona any am-ponja. Fepetra efa noraisin’ ny minisitera tamin’ity taona ity, ohatra, ny tsy tokony handefasana am-ponja ny olona iray raha tsy marim-pototra ny fiampangana azy mba hialana amin’ny hamaroan’ ny olona voatana am-ponja. L’article Raharaham-pitsarana :: Olona roa nahazo didy famoahana vonjimaika vokatry ny fanelanelanana est apparu en premier sur AoRaha.
Fiainam-pikambanana: hifampiarahaba ny Fizafia
Nampahafantarin’ny biraon’ny Fikambanamben’ny zanaka Ampanabaka Fitovinany eto Antananarivo (Fizafia), ny talata lasa teo, ny hanatanterahany ny fihaonambe fifampiarahaban’ny mpikambana tratry ny taona vaovao. Hatao ny alahady 30 jona izao eny amin’ny tokotany malalaky ny lycée technique Alarobia izany. « Hotanterahina mandritra ity fotoana ity ny fivoriambe ara-potoana hanaovan’ny birao tatitra ny asany nandritra ny taona sy ny vinan’asa mbola hotanterahina » hoy ny filohan’ny fikambanana, i Botomahasendry, nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety. « Izao vao azo nirosoana ny fanatanterahana izao hetsika izao satria tsy maintsy andrasana ny hahavitan’reo zana-tsampana roa ambin’ny folo ny azy ireo vao afaka manao ny azy ny foibe », hoy ihany izy.Araka izany, miantso ny zanaka Ampanabaka rehetra ny birao hiatrika izany ary haneho ny firaisankina efa misy hatramin’izay.Synèse R. L’article Fiainam-pikambanana: hifampiarahaba ny Fizafia a été récupéré chez Newsmada.
Matson’ny Foloalindahy: haseho vahoaka ireo fitaovana raitra sy vaovao
“Hiova fa tsy toy ny mahazatra isan-taona ny matso hataon’ny Foloalindahy eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Handray anjara amin’izany ny tafika frantsay, i Kaomoro ary i Maorisy”, hoy ny fanazavan’ny, lehiben’ny sampandraharaha misahana ny serasera sy ny fampitam-baovao eo anivon’ny Foloalindahy, ny Jly Ratovonirina Philibert. Hiova koa ny endriky ny porizenitra fa tsy toy ny mahazatra ho eny amin’ny manodidina ny kianja. Ho haingana kokoa ny famindran’ireo hanao ny matso raha milandamina izany teo aloha. Nambaran’ity manamboninahitra ity fa manodidina ny 3 000 eo ho eo ireo avy amin’ny Foloalindahy handray anjara, miampy ireo avy amin’ny ladoany, ny rano sy ny ala, ny mpandraharaha fonja. Tsy handray anjara kosa ireo mpitaingin-tsoavaly. Haseho amin’io ihany koa ireo fitaovana vaovao azon’ny Foloalindahy miaraka amin’ireo fampisehoana maro samihafa tsy fahita hatramin’izay fa eny Mahamasina raha te hahita izany rehetra izany.Jean ClaudeL’article Matson’ny Foloalindahy: haseho vahoaka ireo fitaovana raitra sy vaovao a été récupéré chez Newsmada.